TOOS: Halkan Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-Iibsiga Cayaartooyda Oo Caawa Xidhmaya – Garsoore Sports
TOOS: Halkan Kala…
TOOS: Halkan Kala Soco Wararkii Ugu Dambeeyay Ee Suuqa Kala-Iibsiga Cayaartooyda Oo Caawa Xidhmaya
Maanta waa maalintii ugu dambeysay ee suuqa kala-iibsiga cayaartooyda bisha Janaayo. Suuqa waxa uu xirmayaa caawa 2da habeennimo xilliga geeska afrika.
Haddaba waxaad halkan hoose si toos ah ugala soco kartaa Wararkii ugu dambeeyay ee Suuqa oo Shabakkada Garsoore Sports idin soo gudbineyso ilaa daqiiqada ugu dambeeysa ee suuqa.
TOOS U DAAWO SKY SPORTS IYO WARARKA SUUQA
23:11- RASMI: LIVERPOOL OO KU DHAWAAQDAY BEN DAVIES
lIVERPOOL ayaa si rasmi ah u shaacisay saxiixa cayaaryahanka daafaca uga cayaarayay kooxda Preston North End, Ben Davies.
Cayaaryahankan 25-jir ah ee daafaca dambe ka cayaara ayaa saxiixay heshiis muddo dheer ah, iyadoo uu xoojin doono daafaca Liverpool oo afartii cayaaryahan ee daafaca dhexe ay dhaawacyo uga maqan yihiin.
Davies ayaa u sheegay bogga Liverpool inuu aad ugu faraxsan yahay ku biirista kooxda.
“Waa fursad aad u weyn. Dhab ahaan filan waa ayay igu noqotay markii warka (Rabitaanka Liverpool) uu soo baxay, laakiin madaxaaga waad galineysaa, fursadda i hortaalla waa mid aan caadi ahayn. Waa ii doqonnimo inaan ka libin keeni waayo, waxaannan wax ka baran doonaa cayaartoyda [kooxda joogta] ” Ayuu yiri Davies.
22:50- RASMI: JOE WILLOCK OO KU BIIRAY NEWCASTLE
Sida uu ku warramayo BT sports, kooxaha Arsenal iyo Newcastle ayaa is af-garad buuxa ka gaaray saxiixa Joe Willock isagoo kooxda Newcastle u saxeexay heshiis amaah ah oo inta xilli-cayaareedka ka dhiman uu ku qaadanayo.
22:22- Zidane oo ka tagaya Real Madrid
Zinedine Zidane ayaa ka tagaya Real Madrid dhammaadka xilli-cayaareedkan, sida ay ku warramayaan warbaahinta Spain.
Bishii November ayaa la go’ansaday in Zidane aanu kooxda sii leylinin wixii ka dambeeya bisha Lixaad ee sanadkan.
Tani ayaa lagu warramayaa inay dhabar-jab ku tahay dedaalkii kooxda ay kula saxiixaneyso Kylian Mbappe oo sababtiisa la filayay inay xiddigga ku riixdo inuu ku biiro kooxda Madrid.
📰🔴| The decision was made in November that Zidane will not carry on as the Real Madrid manager next season, big changes will be made in the summer by the club. (@carrusel – @Carpio_Marca) pic.twitter.com/lHD72dMzxF
— BlancoReport (@BlancoReport) February 1, 2021
22:00 – Liverpool oo saxiixeedii heshay.
Ozan wuxuu fanaannaddan ka helay daafaca Liverpool Virgil, xilligaas oo uu cayaaryahanka kahor intii aanu ku biirin kooxda Schalke.
Liverpool ayaa dhammeystirtay heshiiska daafaca dhexe ee kooxda Schalke ee dalka Jarmalkan Ozan Kabak oo ay ku wareegeyso ammaah uu ku jiro ikhtiyaari iibsasho ah.
Sida uu ku warramayo Fabrizio Romano oo ah wariye Talyaaniga u dhashay oo wararka kala iibsiga caan ku ah, labada koox ayaa saxiixay heshiisyada kala wareegga, iyadoo cayaaryahanka laftiisa uu saxiixay heshiiska kooxdiisa cusub ee Liverpool.
21:44- HESHIIS DHAN
Weeraryahanka Kooxda Everton Cenk Tosun ayaa ku biiray kooxda reer Turkey ee Besiktas inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
21:32- GEDSON OO KU BIIRAY GALATASARAY
Tottenham ayaa xaqiijisay in Benfica ay dib uga yeeratay cayaaryahanka khadka dhexe ee reer Portugal Gedson Fernandes waxaana ay jareen amaahdii uu ku joogay kooxda Benfica.
Haatan wuxuu u safray Turkiga wuxuuna dhameystiray ku biiristiisa Galatasaray isagoo amaah lix bilood ah ku qaadan doona.
Kooxda Galatasaray ayaa maanta si weyn uga adeeganaysa suuqa, waana cayaaryahankii labbaad ee maanta ay la saxiixdaan.
21:25- MBAPPE IYO NEYMAR WEY JOOGAYAAN
Tababaraha kooxda Paris Saint Germain Mouricio Pocchetino ayaa sheegay inuu aaminsanyahay in Mbappe Iyo Neymar ay kusii negaan doonaan kooxda Ligue 1-ka ka cayaarta.
Labbadan xiddig ayaa dalabyo uga imanaya horyaalka Spain ee LaLiga iyadoo kooxaha Barcelona iyo Real ay labadaba xiiso u muujiyeen.
20:50: DeAndre Yedlin > Galatasaray
Daafaca Middig ee kooxda Newcastle United DeAndre Yedlin ayaa heshiis rasmi ah ugu biiray kooxda Turkiga ka dhisan ee Galatasaray, sida uu soo warinayo Wargeyska Sun Sports.
20:33- JOSHUA KING OO LA DOONAYO
Kooxda FULHAM ayaa xilli dambe u dhaqaaqeysa soo xero gelinta saxiixa cayaaryahan Joshua King oo weerarka uga cayaara koocda Bournemouth, Ganacsi ay ku doonayaa heshiis joogto ah.
20:17- SANCHO IYO DEMBELE> UNITED
Manchester United ayaa bartilmaameedsaneysay Jadon Sancho tan iyo xagaagii laakiin weli wax heshiis ah lama gaarin kooxda Borussia Dortmund oo ku aadan saxiixa cayaaryahankan.
Sida laga soo xigtay Daily Express, United ayaa suuqa kala iibsiga xagaaga u dhaqaaqi doonta labada xiddig, Jadon Sancho iyo Barcelona Ousmane Dembele.
Laakiin Red Devils ayaa kaliya dooneysa inay la soo saxiixato mid ka mid ah labada xiddig ee weerarka ka ciyaara.
Kooxda reer Manchester ayaa yara xasilloonayd suuqa kala iibsiga bisha Janaayo laakiin waxay ku sii jeedaan xagaa mashquul badan.
20:12- BOLTON OO LA WAREEGTAY WEERARYAHANKA WEST HAM
Bolton ayaa amaah kula soo wareegtay weeraryahanka West Ham Oladapo Afolayan inta ka dhiman xilli ciyaareedkan.
Afolayan ayaa dhawaan kulankiisii ugu horreeyay u saftay kooxda Hammers kulankii ay la yeesheen Doncaster ee koobka FA Cup-ka balse xilli cayaareedkan fursad kale uma heli doono inuu West Ham maadaama uu amaah ugu biiray kooxda Bolton.
19:54- WIILKA DENNIS BERGHAMP
Watford ayaa la soo saxiixatay Denis Bergkamp wiilkiisa Mitchel oo ah wakiil xor ah oo ka socda kooxda heerka labaad ee Dutch ee Almere City, Mark Irwin ayaa warinaya.
Laakiin 22 jirkaan khadka dhexe ee weerarka ka ciyaara ayaa kaliya la siiyay qandaraas lix bilood ah oo uu ugu ciyaaro kooxda ‘23 jirada ee kooxda Watford
19:42: DIEGO COSTA > West Ham
Diego Costa ayaa loo soo bandhigay West Ham, sida uu sheegayo wariyaha BeIN Sports Tancredi Palmeri.
Warar soo baxay maanta galinkii hore ayaa sheegaya in koox aan la magacaabin oo ka tirsan lixda koox ee ugu sareysa Premier League ay dalab ka gudbiyeen Costa ….. West Ham-na waxay fadhidaa kaalinta shanaad!
19:35 – WAALIDA NEWCASTLE – NEYMAR AYAY RABEEN
Tababaraha kooxda Newcastle Steve Bruce ayaa mar wax laga weydiiyay xiisaha ay u hayaan Idriss Gana Gueye oo ka tirsan PSG ku jawaabay in Neymar uu yahay qofka ay xiiseenayeen balse ma aysan u suuragelin. 😂😂😂
19:18- Rasmi: BRIGHTON OO KOOXO BADAN KU GARAACDAY SAXIIXA CAICEDO
Kooxda Brighton ayaa dhammeystirtay saxiixa cayaaryahanka aadka loo qiimeeyo ee reer Ecuador Moises Caicedo oo ay kala soo wareegeen kooxda Independiente del Valle.
Caicedo waxaa horay u raadinayay kooxaha waaweyn ee Premier League sida Man Utd, iyo West Ham.
19 jirkaan ayaa saxiixay heshiis ku eg June 2025.
19:09 – RASMI: SAXIIXA XIDDIG SOO BAXAYA
Kooxda kubbada-cagta ee Blackburn Rovers ayaa heshiis amaah ah kula soo saxiixatay daafaca aadka loo qiimeeyo ee Man City Taylor Harwood-Bellis ilaa dhamaadka xilli ciyaareedkaan.
Tallaabo wanaagsan oo labada dhinacba ah.
✍️ #Rovers are delighted to confirm the arrival of rising star Taylor Harwood-Bellis on loan from Manchester City until the end of the season.#WeAreTogether 🔵⚪️ pic.twitter.com/1z4mvnjUTY
19: 05- WAA LA FASAXAYAA
Da’yarka Arsenal Joe Willock ayaa lala xiriirinayay inuu amaah ugu biirayo kooxda Newcastle maanta.
Sida laga soo xigtay Sky Sports, Gunners ayaa diyaar u ah inay fasaxdo Willock si ay u hesho boosas banaan oo kooxda koowaad ah.
Da’yarkan ayaan ku soo bilaaban kulan Premier League-ga ah tan iyo bishii 29 kii November sannadii hore.
Soo bixitaankii Emile Smith-Rowe iyo sidoo kale imaatinkii Martin Odegaard ayaa si weyn hoos ugu dhigay fursadaha Willock ee ku laabashada qorshooyinka Mikel Arteta
18:52- RASMI: Pardington Oo Ku Biiray Mansfield
Goolhayaha kooxda Wolves Jamie Pardington ayaa amaah ugu biiray kooxda ka ciyaarta heerka labaad ee Mansfield Town inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan.
18:43 – WOLVES MA DOONEYSO CIDNA
Tababaraha kooxda Wolves Nuno Esperito Santo ayaa sheegay in kooxda uu leyliyo aysan wax cayaartooy ah lasoo saxiixaneynin maanta, oo ah maalinta ugu dambeysa suuqa kala-iibsiga bisha Janaayo.
18:32- TARTANKEY KUSOO LAABTEEN
Kooxda West Brom ee horyaalka Premier League-ka dalka Ingiriiska ayaa kusoo laabatay tartanka loogu jiro saxiixa daafaca/khadka-dhexe ee Arsenal Ainsley Maitland-niles , Sida lagasoo xigtay Sky Sports.
Cayaaryahankan ayaa la kulmay tababare Mikel Arteta iyo agaasimaha farsamada kooxda Edu, kooxda ayaana diyaar u ah inay amaah ku fasaxdo maanta.
Leicester ayaa aheyd kooxda uu doorbidayo inuu tago, laakiin Arsenal ayaa ka caga jiideysa inay u ogolaato inuu ku biiro koox si fiican ugu tartameysa boosaska loogu soo baxo koobabka yurub.
Waxay u muuqatay Maitland-Niles inuu u dhaqaaqayo Southampton, laakiin heshiiska wuxuu noqday mid qabow iyadoo cayaaryahankan uu doonayo inuu ka ciyaaro booska uu doorbidayo ee khadka-dhexe Southampton-na waxay dooneysaa daafac-middig.
18:23- FULHAM OO WEERAR DOONEYSA
Kooxda Kubbada-cagta ee Fuham ayaa isku dayaysa inay maanta dhammeystirto xiisaha ay u hayaan weeraryahanka Kooxda Bordeux ee dalka Faransiiska Josh Maya waxaana ay doonayaan inay laacibkani heshiis amaah ah kusoo qaataan.
18:17- PRESTON AYUU YIMID
Daafaca kooxda Liverpool Sepp Van Den Berg ayaa yimid magaalada Preston si uu tijaabada caafimaadka ugu maro kooxda Preston United ee heerka labbaad ee dalka Ingiriiska.
18:00 – DELE WUU JOOGAYAA
Cayaaryahanka Khadka dhexe ee kooxda Tottenham Dele Alli ayaa lagu soo waramayaa in uu sii joogayo kooxda Spurs bishan.
Cayaaryahankan ayaa aad u doonayay inuu ka tago kooxda Tottenham waxaana aad loola xiriirinayay inuu ku biiro kooxda PSG ee dalka Faransiiska balse Sida laga soo xigtay Sky Sports, Dele Alli kama tagi doono kooxdiisa Spurs maalinta ugu dambeysa suuqa kala iibsiga.
17:48 – Maalin Mashquul Ah
Tababaraha kooxda New Castle United Steve Bruce ayaa rajaynaya ku jira maalin mashquul ah – Hamza Choudary oo Leicester ka tirsan Iyo Joe Willock oo Arsenal ah ayuu bartilmaameedsanayaa.
Uma muuqato in Hamza Choudary uu maanta ka tagayo Leicester waxaana la filayaa in Newcastle ay xooga saarto Willock.. faahfaahint
17:29 – OZAN KABAK OO Heysta Funaanada VVD
Cayaaryahan OZAN KABAK oo ka tirsan Kooxda Schalke 04 ayaa bartiisa Instagramka soo dhigay sawir uu gacanta kor ugu hayo funaanada daafaca kooxda REDs ee Virgil Van Dijk. Isagoo uga mahadcelinaya hadiyada funaanada ah ayuu tibaaxay inuu VVD yahay mid kamid ah daafacyada ugu wanaagsan dunida.
Daafacan ayaa maanta aad loola xiriiranayaa inuu ku biiro kooxda Liverpool , waxaana macquul ah in uu u wareego saacadaha soo aadan.
17:09- Tababaraha Leicester Brendan Rodgers ayaa ku andacoonaya inay tahay “50-50” hadii uu maanta la soo wareegayo ciyaaryahan khadka dhexe ah, sida uu warinayo Charlie Wyett.
Nathaniel Chalobah oo ka tirsan Watford ayaa bartilmaameedkiisa koowaad ahaa halka kooxda ay sidoo kale eegtay heshiis amaah ah oo ay kula soo wareegeyso Ainsley Maitland-Niles oo ka tirsan Arsenal.
Rodgers ayaa yiri: “Waan isku dayeynaa. Hadii aan la heli karin cayaaryahan waxay la micno tahay uu yahay cayaartoyda aan la heli karin.”
Tababaraha Leicester ayaa sidoo kale rajo badan ka qaba in Hamza Choudhury uu sii joogo kooxda, taas oo welwel badan ka yarreyn karta haddii ay suuragasho.
16:42- Kooxda Schalke 04 ee dalka Jarmalka ayaa dooneysa inay maanta lasoo saxiixato daafaca Kooxda Arsenal iyo xulka Jarmalka Shokdran Mustafi.
Kooxda Schalke ayaana kula soo saxiixaneysa Mustafi heshiis u ogolaan kara daafacooda dhexe Ozan Kabak inuu ku biiro Liverpool.
15:42– Liverpool ayaa dalab u dirtay kooxda Marseille kaasoo ku aadan saxiixa daafaca dhexe ee reer Croatia Duje Caleta Car, oo 24 jir ah. faahfaahinta halkan ka aqriso https://www.garsoore.com/index.php/2021/02/01/liverpool-oo-dalab-ka-gudbisay-daafaca-kooxda-marseille-duje-caleta-jar/
14:11- Leicester ayaa qarka u saaran inay heshiis amaah ah kula soo wareegto cayaaryahanka kooxda Arsenal iyo xulka England Ainsley Maitland-Niles. Southampton, West Brom iyo Newcastle ayaa sidoo kale xiiseynaya 23 jirkaan.
14:06- Cayaaryahanka khadka dhexe ee kooxda Paris St-Germain Idrissa Gana Gueye, oo 31 jir ah, ayaa iska diiday fursad uu amaah ugu biiri lahaa kooxda Newcastle United.
14:02- Daafaca Manchester United Marcos Rojo oo 30 jir ah ayaa qarka u saaran inuu si bilaash ah ugu biiro kooxda Boca Juniors kaddib markii Red Devils ay u ogolaatay inay joojiso qandaraaska xiddigan reer Argentina .
Si la mid ah Rojo, tababaraha United Ole Gunnar Solskjaer ayaa la faray inuu iibiyo Phil Jones iyo Sergio Romero si uu lacag ugu helo saxiixa daafac xagaagan.
13:51– Cayaaryahanka khadka dhexe ee reer Denmark Christian Eriksen oo 28 jir ah oo lala xiriirinayo ku laabashada kooxdiisii hore ee Tottenham, ayaa laga yaabaa inuu sii joogo Inter Milan wixii ka dambeeya maalinta isniinta ee suuqa kala iibsiga isla markaana uu door muhiim ah ka ciyaaro kooxda, ayuu yiri madaxa fulinta ee kooxda reer Talyaani Giuseppe Marotta.
13:42- Tababaraha kooxda PSG Mauricio Pochettino ayaa doonaya inuu lasoo saxiixdo daafaca Spain iyo kooxda Real Madrid Sergio Ramos oo 34 jir ah xagaaga.
13:34- Daafaca kooxda RB Leipzig iyo xulka Faransiiska Dayot Upamecano, oo 22 jir ah ayaa laga yaabaa in sannadkan uu usoo dhaqaaqo horyaalka Premier League-ga, madaama wakiilkiisa uu sheegay inuu kala dooran doono labada koox ee Ingariiska ugu sareysa iyo Bayern Munich.
13:23- Cayaaryahanka khadka dhexe ee Tottenham Tanguy Ndombele, oo 24 jir ah, ayaa shaaca ka qaaday in saaxiibkiisa xulka France Kylian Mbappe, oo 22 jir ah uu isku dayay inuu ka dhaadhiciyo inuu kula biiro Paris St-Germain.
Sergio Ramos Oo Codsaday In Loo Fasaxo Ku Biirista Manchester United
Liverpool Oo Dalab Ka Gudbisay Daafaca Kooxda Marseille Duje Caleta Jar